Sary sy Vina APM
Tapaka ihany koa fa afantoka eto Antananarivo aloha ny ezaka rehetra ho an’ny APM manerana ny Nosy. Izany eritreritra ny ho candidat Ben’ny Tanàna Antananarivo izany dia misy fepetra:
- fepetra takian’ny lalàna
- raha madio ny fifidianana
- ary raha ankatoavin’ny Antoko Politika Madio.
Hamafisina ihany koa ny fanambarana nataon’ny filohan’ny APM, 1 volana lasa izay fa MANDAT TOKANA ihany no hijanonany eo amin’izany toerana izany raha tahian’Andriamanitra ka lany.
Ho porofoina fa mahavita zavatra rehefa misy ny finiavana sy ampy fiomanana. Porofoin’ny APM ihany koa ny teny filamatry ny antoko: “Firenena fa tsy seza”, izany hoe ny tombotsoan’ny firenena no ambony fa tsy ny fitadiavana seza sy ny fitiavana hijanona ela eo amin’ilay seza.
Ankoatr’izay dia hamafisin’ny APM ireto teboka manaraka ireto:
1- tsy nanohana, tsy manohana ary tsy hanohana candidat ny APM amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ity 2018 ity;
2- manambara ny APM fa tsy handrotsaka olona amin’ny fifidianana rehetra izay misy alohan’ny fifidianana Ben’ny Tanàna amin’ny 2019.
Mariky ny fiomanana sy fahavononana dia natolotra ny be sy ny maro ny 10 janoary 2018 tao amin’ny “Le Pavé Antaninarenina” ny vinam-piarahamonina na “projet de société” ho an’Antananarivo Renivohitra.